In Duke of horumarinta ee sayniska iyo farsamada waxa aad u muhiim ah in la ogaado in farsamooyinka cusub la soo saarayo oo la maalin kasta marayay oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user u baahan yahay si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah functionalities tahay waxaa loo isticmaalaa on xiriirta OS in la isticmaalo in ka badan PC ama laptop. Dhab ahaantii taas maanka lagu hayo Microsoft ayaa soo saartay caawiye digital for Windows 10 oo uu soo magacaabay Cortana iyo ilaa hadda waxa la arkaa in ay tahay is-dhexgalka ugu fiican si loo hubiyo in user aan la wada cafiyo oo keliya, laakiin sidoo kale wadahadalo OS in hore la heli karo oo kaliya telefoonka daaqadaha. Bilaabay in daaqadaha 10 daayo ie 9926 Cortana aysan si buuxda u functional weli iyo Xiisaha daaqadaha 10 iyagoo buggy hubiyaa in user ma awooddo in ay isticmaalaan shaqo buuxda, laakiin weli haddii Falanqeynta waa ay awoodaan in ay u ordaan gal mashiinka markaas muuqaalada Cortana ay yihiin kuwo laga riyaaqay laga yaabaa in sifooyinka wanaagsan iyo user sabab la mid ah ayaa sidoo kale ka dhigi doonaa hubiyo in gobolka is-dhexgalka tahay barnaamijka ayaa sidoo kale ku riyaaqay. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan qaabeynta Cortana ee la xiriirta Windows 10.
Qeybta 1: Sida loo kiciyo Cortana on Windows 10?
Qeybta 2: Sida loo isticmaalo Cortana cod amarka?
Qeybta 3: Waa maxay Cortana naga caawin kara in la sameeyo Windows 10?
Qeybta 4: Cortana vs. Siri, faa'iidada iyo khasaaraha
Qaybta 1aad: Sida loo kiciyo Cortana on Windows 10?
Waa habka fudud oo toos ah si ay u hubiyaan in Cortana aan la dardargeliyo oo kaliya laakiin user sidoo kale uu helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah qaababka farshaxan iyo iyaga si buuxda u raaxaystaan. Waa in la ogaadaa in user ee arrintan la xiriira u baahan yahay si loo hubiyo in fikradda ah kaakicin Cortana iyo codka Cortana kaakicin ama Hey Cortana jira laba arrimood oo kala duwan oo tutorial this hubiyo in labada geeddi-ka ayaa looga munaaqashoodey buuxa si ay u hubiyaan in ka dhigi doonaa user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Geedi socodka waa cadaalad ah oo fudud oo soo socda waa tallaabooyinka ay tahay in la raaco arrintan la xiriira si loo hubiyo in ugu fiican ayaa loo gudbiyey in nidaamka ereygu u this piece casriga ah cabsi badan:
1. hawsha qataara user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in icon Mic waxaa riixi in la bilaabo nidaamka:
2. icon goobaha markaas waa in la daah furo si loo hubiyo in hannaanka dheeraad ah horumarka:
3. suuqa kala Cortana soo muuqan doono oo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in icon goobaha waxaa riixi dhinaca bidix ee suuqa si loo horumariyo. Tab ka dhanka ah Cortana waa in ay si aad u hubiso in lagu gagadin in hawsha halkan hasa
Haddaba waxaa feature ah oo amarka la soo saaro iyo user doonayo in la hubiyo in muujinta ah waxaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in ugu fiican ayaa loo gudbiyey in nidaamka arrintan la xiriira. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa inay raacaan wadadii habka ah in la halkan ku xusan doonaa si loo hubiyo in ugu fiican ayaa kaliya ma ahan dhiibay laakiin user ee mustaqbalka ayaa sidoo kale ka faa'iidaysan karaan oo ka mid ah gacanta ku horumarsan ee Cortana sida ugu dhakhsaha badan Windows 10 ayaa laga soo saarey Oo Dhameystiran:
1. icon goobaha The gudahood bar hawsha ay tahay in la riixi si loo hubiyo in hannaanka horumarka,
2. Habka uu soo iftiimiyay markaas waa in la soo jeestay oo ku saabsan si loo hubiyo in Cortana waxaa firfircoonaan:
3. Marka la sameeyo user ay u baahan tahay inay hesho aan button cod Baro si loo hubiyo in jihada saxda ah waxa laga soo qaatay arrintan la xiriira:
4. Nidaamka markaas ka dhigi doonaa in la hubiyo in aqoonsiga codka 6 weedho aan la siiyey oo keliya, laakiin waxay sidoo kale lagu celiyo si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo Cortana aqoonsan codka loo isticmaalo mustaqbalka iyo weliba. Button bilowga waa in la sii adkeeyey in la sii wado oo ugu dambeyntii ku dhameysan habka ee buuxa:
Prat 3: Waa maxay Cortana caawin kara inaannu samayno on Windows 10?
Ka dib markii qaar ka mid ah muuqaalada in Cortana ka jawaabaan oo ay qabtaan marka ay timaado Windows 10:
Codka aqoonsiga shakhsiga ayaa intaa ku daray si loo hubiyo in dhererka vocal milkiilaha waxaa dhaba ajiibay iyo codka dad kale wada indha tiray.
Kaftanka ayaa sidoo kale lagu soo daray iyo hadda user ee la weydiisan karaa qofka digital ah si loo hubiyo in kaftanka waxaa lagu sheegay marka la dalbaday iyo arrin guud ee kaftan waa sii raagayaan.
Location salaysan cod amarka u ogolaataa user ay u DEAD amarrada la siiyay kaaliyaha meel gaarka ah sida dukaanka raashinka iyo shaqo si ay u awoodo in la kala saaro habka ugu fiican.
Cortana waxaa sidoo kale lagu biiriyay Madaxweyne Siilaanyo iyo sabab la mid ah qoraalka xiga ee Console ciyaaraha ay ka shaqeynayaan si buuxdo gundhig doonaa.
Halo kulan-aragnimada ayaa sidoo kale la xiriiray si keeneysa in hubiyaa in ku xigeenka ayaa la illoobay oo madax u tara.
Markii barnaamijka waxaa la soo saaray waxaa la isticmaalo telefoonka Windows 7 oo kaliya laakiin waxaa haatan lagu sameeyey si buuxda u la jaan qaada ah desktops iyo laptops ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in feature internet raadinta ayaa sidoo kale waxaa u suurta arrintan la xiriira.
Browser ayaa Edge taas oo Microsoft ayaa ugu dambeyntii hoos sahamisa Internet ayaa laga sameeyey si buuxda u socon in ay la Cortana shaqeeyaan sidii kibis iyo subagga
The files deegaanka iyo sidoo kale kuwa ku yaal mid ka mid drive laga heli karaa si fudud oo ku qanacsan isticmaalaya amarrada Cortana Voice.
Shirkadaha horumarinta kala duwan ee Windows 10 Laptops yeelan doonaan badhan loogu talagalay Cortana taas oo ka dhigi doonaa suuqa kala Cortana ka arbushin ilaa sida ugu dhakhsaha badan ayaa loo sii cadaadisay, oo ay tahay in la hubiyo in uu waxtarka ku xigeenka waxaa kor u kacay.
The macruufka iyo barnaamijyadooda android ee Cortana ayaa sidoo kale la sameeyey si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo brand aragti xidhay shirkadda la daalay.
Dadka isticmaala qaar ka mid ah Siri waa caawiyaha codkii ugu fiican iyo qaybtan la shan faa'iidada iyo khasaaraha labada kaaliyayaasha digital sakhiray waaweyn ee ka qaban doonaa:
Faa'iidada ugu horrayn waxa weeyi ee Cortana waa in ay aqoonsan codka shakhsi ahaaneed ee user kii waxaa ka hawlgala oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in kaaliyaha codka waa inuu xaqiijiyo in cod milkiilaha ee la aqoonsan yahay oo ka jawaabay sida marka la barbar dhigo codad kale ee asalka ah, halka Siri horumartay by Apple ma laha feature sida gundhig oo uu noqonayaa khasaaro ah kaaliyaha cod in la soo saaro qalabka macruufka iyo Mac ah.
Markaan si kooban u Siri waa ka maskax iyo jawaab u user la jawaabaha fog ka sii dadaal marka la barbar dhigo Cortana iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in Siri ee gacanta cod fog tahay wax badan ka wanaagsan yahay Cortana ah.
Daarida Cortana fog tahay inta badan ka sahlan ahayn Siri sida Siri user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in button guriga waxaa hoos u riixriixan oo ay sameeyaan baahan yahay halka u Cortana icon lagu meeleeyo ugu desktop ama user ayaa sidoo kale waxa ay dhaqaajiso karaa telefoonka adigoo gujinaya Codsiga waxaa ka mid ah.
Habkaani wuxuu ku waano xiriir ku salaysan waxaa laga heli karaa Cortana laakiin ma Siri iyo sabab la mid ah waxa ay xasuusinaysaa qof oo ku saabsan hawsha uu leeyahay si ay u qabtaan ku saabsan xiriir gaar ah sida ugu dhakhsaha badan user bilaabo inuu email iyo iyaga qoraal.
The style Shazam Music feature raadinta sidoo kale u ogolaataa user si aad u hesho faahfaahinta ugu fiican iyo sabab la mid ah sidoo kale waa mid ka mid ah muujinta ugu fiican oo anfacaya oo uu soo gundhig gudahood Siri iyo marka ay timaado marayso Siri keenaysaa.
> Resource > Windows > Sida loo isticmaalo Microsoft Cortana on Windows 10